Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားရှိခြင်းမရှိခြင်း..
မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်သူ၊ လက်ရှိ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ လည်းဖြစ်သူ ဦးတင်ဦးရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုတွေကို အာအက်ဖ်အေ မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုကနေ ပြည်သူ့ဖက်က ဗိုလ်ချုပ် ကြီးတယောက် အစီအစဉ်အနေနဲ့ ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ ၃၊၁၀၊၂၀၁၁ နေ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်မှာ ဦးတင်ဦး က ရိုဟင်ဂျာလို့ မခေါ်ပဲ ဘင်္ဂါလီလို့ခေါ်တာကိုမကျေနပ်လို့ ဆိုပြီးမြောက်အမေရိကတိုက်မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ BRA NA ဘင်္ဂါလီ (ရိုဟင်ဂျာ) အစည်းအရုံးဥက္ကဌ ဒေါက်တာဝါကာအူဒင်းမှကန့်ကွက်တာကို ၁၄၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁နေ့က အာ
အက်ဖ်အေရေဒီယို အစီအစဉ်မှာ ကြားလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တကောင်းအနွယ်ဝင်
ဘင်္ဂါလီတွေ မဟုတ်မမှန် ဖော်ထုတ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားအလိမ်ကိစ္စကို
အများပြည်သူတွေသိစေဖို့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးသား လိုက် ရခြင်းဖြစ်တယ်။
*ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားရှိခြင်းမရှိခြင်း* မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုတာကို
မြောက်ဦးခေတ်၊ဓည၀တီခေတ်တို့ မှာပဲရှာရှာ၊ ကိုလိုနီ ခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ (၁၈၇၂ခုမှ ၁၉၁၁ခု) စတဲ့သန်းကောင်စာရင်း (census) တွေမှာပဲရှာရှာ ရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့
တိုင်းရင်းသားအလိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အတုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုတာဟာ အရင်ကလည်း မရှိခဲ့ဘူး။
အခုလည်းရှိမနေဘူး။ နောက်လည်းရှိလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီအကြောင်းကိုပဲ
သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ရခိုင် တိုင်းရင်း သားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပညာရှင်တွေရှင်းပြတာ
ထုတ်ပြန် ထားတာတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂါ လီတွေဖြစ်တဲ့
ရိုဟင်ဂျာလှုပ်ရှားမှုဟာ ယခုအထိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို လူ့ အခွင့်အရေး ထက် ကျော်လွန်ပြီး လုပ်နေတယ်။
ပထ၀ီအနေအထားအရ ခိုင်လုံတဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊
ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ ကိုယ် ပိုင်ဓလေ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာရှိသူများကို
တိုင်းရင်းသားလို့ခ်ါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေဟာ မနေ့တနေ့ကမှ
ရုတ်တရက်ကောက်ကာငင်ကာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရာဇ၀င်နဲ့ချီတဲ့
သမိုင်းအထောက်အထားတွေနဲ့ ရှင်သန် ကြတာဖြစ်တယ်။ ရခိုင်၊မွန်၊ဗမာ၊ရှမ်း၊ကရင်၊ကယား(ကရင်နီ)၊ ကချင်၊ချင်းစတဲ့ အဓိက တိုင်းရင်းသား အင်အားစု ကြီးတွေမှာ ခိုင်မာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ကျောက် စာနဲ့၊ ပေပုရပိုက်တို့မှာတွေ့ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်း သားတွေဟာ ဘာသာရေးကို
အခြေခံပြီး တိုင်းရင်းသားဖြစ်လာသူများလည်းမဟုတ်ပါ။ ရှိရင်းစွဲ ဓလေ့ထုံးစံ
အတိုင်း သာ ရှေးပဝေဏီကပင် နေထိုင် သူများဖြစ်တယ်။
အာရပ်လူမျိုးတွေက အရှေ့တာင်အာရှကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်လာရောင်းကာ
ရမ်းဗြဲကျွန်းနားက သင်္ဘော ပျက်ပုံပြင်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာကို
ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး သမိုင်းကိုလုပ်ကြံဖန်တီးလို့ မရပါ။မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရခါစမှာပင်မူဂျာဟစ် သူပုန်များထကြွခဲ့တာ သမိုင်းအမှန်ပါ။ ဗမာ့သေနတ်ကိုင် တပ်ရင်း(၅) က မူဂျာ ဟစ်တွေကို တောင်ပြိုတိုက်ပွဲနဲ့ အပြီးသတ်တိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က ရန်ကုန်- အင်းစိန်တိုက်ပွဲတောင် မဖြစ်သးတဲ့အချိန်ပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ (အရှေ့ပါကစ္စတန်) ဆိုတာလည်း မပေါ်သေးပါ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်။ မူဂျာဟစ်သေနတ်သံတွေနဲ့အပြိုင် ဘူးသီးတောင်
မောင်းတောအမတ်ဖြစ်တဲ့ မစ္စတာဂါးဖါးရ်က ဂါးဒီယန်း သတင်းစာ ကနေ ရိုဟင်ဂျာ
အမည်ပေးထားတဲ့ မူဆလင်လူမျိုးသစ်ကိုဖန်တီးအသက်သွင်းခဲ့တယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စဟာ
လိမ်ညာ မှုတခုသာဖြစ်ကြောင်း၊ မူဆလင်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါကြောင်း ဦးဖော်ဇံ ဆိုသူက ဂါးဒီယန်း သတင်းစာမှာပဲ ချက်ချင်းတုန့်ပြန်ရေးသားခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တောင်ပိုင်းမှ ပတ္တနီ၊ ယာလာနဲ့ နာရာသီဝပ်ဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့
မူဆလင်ခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင် ဂျာလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ တပုံစံတည်းပဲဖြစ်တယ်။ ထိုင်းတောင်ပိုင်းမူဆလင်သမိုင်းကလည်း အာရပ်တွေရဲ့ ဟင်းခပ် အမွှေးအကြိုင်နဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင်တယ်။
၁၉၅၀ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်များက မူဂျာဟစ်သူပုန်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာဟာ ဆက်စပ်နေတယ်။ ဒီအရင်က
မရှိခဲ့ပါ။ မြစ်ဖျားခံမှုက ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့ရဲ့ တံခါးမရှိ၊ဓါးမရှိ လူဝင်မှုဝါဒမှ
စတင်ခဲ့တယ်။ ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက် ခါစ (၁၈၂၅) ခုနှစ်က ရခိုင် ပြည်မှာ
မူဆလင်လူဦးရေ သုံးသောင်း (၃၀၀၀၀) သာရှိခဲ့ရာမှ ၁၉၃၀ ခုနှစ်မှာတော့ မူဆလင်ဦးရေ
နှစ်သိန်းတ သောင်းခုနှစ်ထောင်ရှစ်ရာ (၂၁၇၈၀၀) အထိတိုးပွားခဲ့တယ်။ ၁၉၃၉
ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှအစိုးရက စုံစမ်းရေး ကော် မရှင်တခုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ ကော်မရှင်က
မူဆလင်ဦးရေ အဆီး အတားမရှိ တိုးလာမှုကို မဟန့်တားပါက လူမျိုးရေး
ပဋိပက္ခများဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ အစီရင်ခံခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာလို့
လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှာ ကုလား- ရခိုင်အဓိကရုဏ်းပေါ်ထွက်
ခဲ့တယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က အိန္ဒိယမှ သွင်းလာတဲ့ လယ်ကူလီနဲ့ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး
ရိုဟင်ဂျာဟာအသွင် သဏ္ဍာန်အရကို မတူညီပါ။ အိန္ဒိယလယ်ကူလီတွေက နယ်ချဲ့ စံနစ်နဲ့
စီးပွားရေးအပေါ် အခြေခံလို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ချိန်မှာ ပြန်ထွက်သွားကြတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကတော့ ခြေကုတ် ယူနယ်ပယ်ချဲ့ဖို့နဲ့
နိုင်ငံရေးအာဏာအထိ တက်လှမ်းဖို့ အစီအစဉ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။
*မြန်မာမူဆလင်တိုင်း ရိုဟင်ဂျာ (တိုင်းရင်းသားအလိမ်) မဟုတ်*
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်နဲ့ ရဲဘော်ကိုထွေးတို့၊
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးမြန်မာသံ အမတ်ကြီးဦးဖေခင်တို့ဟာ
မြန်မာအမျိုးသားရေးစိတ်ရှိတဲ့ မြန်မာမူဆလင်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ အညာမှာရှိတဲ့
မြန်မာမူဆလင်မိသားစုတွေက မွေးဖွားခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ မြန်မာရာဇ၀င်မှာ
ဘုရင်ကချီးမြောက်ခဲ့တဲ့ ဗျဝိ၊ ဗျတ္တဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းညီအကို ရှိပါတယ်။
ဒီညီအကိုလည်း သင်္ဘောပျက်ပြီး ယခုမြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ အရပ်ကိုရောက် လာသူ
တွေဖြစ်တယ်။ ဒီလိုရာဇ၀င်တွေကျတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီးလိမ်ညာဝါဒဖြန့်နေသူတွေ
မသိသလိုနေကြတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာ (တိုင်းရင်းသားအလိမ်) မပေါ်ထွက်မှီ
ကတည်းက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရက် သားကျနေကြတဲ့ မူဆလင်တွေ သားစဉ်
၊မြေးဆက်ရှိကြတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဟာ စစ်တကောင်းက ဘင်္ဂါလီလောက် ကိုတောင်
အမျိုးမတော်ပဲ၊ ခုန်ကျော်ပြီး အာရပ်တွေနဲ့ အမျိုးစပ်ထားပုံက ဇာတ်နိမ့်၊
ဇာတ်မြင့်ဆိုတာကို မျော်မြင်လို့ လား၊ တမန်တော်ရဲ့ သာကီမျိုးတွေဖြစ်ချင်လို့လား
*တိတ်တဆိတ်မကောင်းကြံမှု (Conspiracy Theory)*
အာရပ်ကုလားအုပ်ပုံပြင်တို့ဟာ ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်တယ်။၁၉၈၀ နှစ်များဝန်းကျင်မှာ
ရန်ကုန်မြို့မှာပါပြန့်ခဲ့တဲ့စာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာ သာ အမျိုးသ္မီးကိုယူရင်
ငွေဘယ်လောက်၊ ဘွဲ့ရတို့၊ ဗိုလ်မှူးသမီးတို့ ယူရင်ငွေ
ဘယ်လောက်ချီးမြောက်မယ်ဆိုတဲ့စာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီအချိ်န်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ
ရခိုင်ကျောင်းသား အများအပြားနေတာက ပင်းယဆောင်ဖြစ်တယ်။ ပင်းယဆောင်မှာ
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောဘက်က ကျောင်းလာတက်တဲ့ ကုလားကျောင်းသားလေး၊
ငါးဦးကိုထောက်လှမ်းရေးက စာကိစ္စနဲ့ ဖမ်းဆီးသွားတာကိုလည်း တဆောင်တည်းနေ
ပါမောက္ခချုပ်တို့တော့ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖမ်းခံသွားရတဲ့ ဘူးသီးတောင်၊မောင်းတော
ကျောင်းသားလေး၊ ငါးဦးဟာ လစ်ဗျားနိုင်ငံထောက်ပံကြေး (stipend) နဲ့
ကျာင်းတက်နေတာလို့ နှစ်များစွာ ကြာပြီးမှ ဆက်စပ်တဲ့
စစ်သံမြိုင်နေချိန်မှာကုလားတွေ (မဆလရွေ့ ပြောင်းမှု၊
မှောင်ခိုခေတ်ကြောင့်ရောက်လာသူများ) စုနေကြတဲ့ ရွာတရွာမှာ ကုလားတဦးသေဆုံးတယ်။
သူတို့ ဘာ သာရေးအရ င်္သချိုင်းသတ်မှတ်ပေးရမယ်ဆိုပြီး တောင်းလာတယ်။ အဲ့ဒီဒေသ
တာဝန်ကျတဲ့ KNLA ကရင်စစ် ကြောင်းမှူး ပြန်ပြောတာရှင်းပါတယ်။ ငါတို့ တသက်လုံး
ဒီမှာနေလာတာ ဘာင်္သချိုင်းမှမရှိဘူး။ ဒီတိုင်းမြုတ်တာ၊အပုပ်နံမထွက်စေနဲ့တဲ့။
ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒီအေဘီထဲပါဖို့ကိုလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အခြေစိုက်
ရိုဟင်ဂျာ (အာအက်စ်အို) အဖွဲ့က ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်။ တိုင်းရင်း သားအဖွဲ
့အားလုံးကလက်မခံတော့ ဒီမိုကရေစီမရှိဘူး၊ လူ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့
သမုတ်ခဲ့သေးတယ်။ ဘာသာရေးအလံထောင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ
(တိုင်းရင်းသားအလိမ်)မှိုင်းတိုက်နေမှုများကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ရခိုင်ပြည်
စစ်တွေတောင်မရောက်ဘူးတဲ့သူတွေ၊ ရန်ကုန်မှာ ပညာသင် ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့
မူဆလင်ဆိုသူတွေက စစ်တကောင်းဇာတိလား၊ အာရပ်ဇာတိလားမကွဲပြားပဲ
ရိုဟင်ဂျာဇာတ်လမ်းကို ယူကေတို့၊ မြောက်အမေရိကားတို့ကနေ ထုတ်လုပ်နေကြတာ
ကို့ရို့ကားယား ဖြစ်နေတယ်။ ရွှေသမင် ဘယ်ကထွက် ဆော်ဒီအာရေဗျက ထွက်သလို ဖြစ်နေတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအရေးရဲ့ နောက်မှာ ဆော်ဒီလို အာရပ်ငွေတွင်းတွေ လိုက်ပါလာတော့
ခေတ်မှီတဲ့ ရောင်းဝယ် မှုတွေပေါ် ပေါက်လာတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရဲ
့ပထမဆုံးသမတကြီးသားတာမဟုတ်၊ ဆဌမသံဃာယနာတင် ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ သား လည်း
၁၉၉၄- ၅ ခုနှစ်များအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမူဆလင်အကျိုးဆောင်များအဖွဲ့ဆိုပြီး
ဆော်ဒီအာရပ်ကမ္ဘာမှ ငွေဂွင် ဖန်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒီလူတွေဟာ
တိုင်းရင်းသားစစ်ရုံတင် မကဘူး။ မြန်မာ့အဓိပတိအနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက် မှာလည်း
မြန်မာအမျိုးသားရေးစိတ်ရှိတဲ့ လေးစားရတဲ့ ဟာဂျီတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒီဟာဂျီကြီးတွေဟာ ဟိုအရင် ကတည်းက နှစ်စဉ် မက္ကာကို ဘုရားဖူးသွား သူများဖြစ်လို့
ဆော်ဒီက ငွေအထောက်အပံ့ရဖို့ နည်းတွေကို ပြောဆို ဖူးပေမယ့် တိုင်းပြည်အတွက်
မလုပ်သင့်မလုပ်အပ်တာကိုသိလို့၊ နိုင်ငံရေးအမြင်လည်းရှိလို့ သေတပန်သက်တဆုံး
မြန်မာအမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်နဲ့ ရပ်တည်သွားကြပါတယ်။
နိုင်ငံတွေရဲ့ နယ်စပ်စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ စပ်တဲ့ဒေသတိုင်းမှာ
တိုင်းရင်းသားတွေပြန့်နှံ့ခဲ့ရတယ်။ အိန္ဒိယ- မြန်မာနယ်စပ် မှာ ချင်းလူမျိုးဆို
အိန္ဒိယ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်း ရှိတယ်။ နာဂနဲ့ ကသည်းလူမျိုးလည်း ဟိုဘက်နဲ
့ဒီဘက်မှာ ရှိကြတယ်။ ချင်းတိုင်းရင်းသားဆိုရင် ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်တယ်။
၀လူမျိုးဆို တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံမှာ ရှိတယ်။ မြောင်- မျော့လူမျိုးဆို
ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်တို့မှာပြန့်နှံ့ နေတယ်။ ဒါတွေဟာ ကိုလိုနီသိမ်းယူမှုရဲ့ 
မြေပုံအရ grid line ဆွဲမှုတွေကြောင့် ဖြစ်သွားရတယ်။ တခြားမကြည့်ပါနဲ့ တချိန်က
မြန်မာပိုင် ကပ္ပလီကျွန်း (adaman island) ဟာ ယခုအခါမှာ အိန္ဒိယပိုင်
ပို့ဘလဲယားကျွန်း ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီကျွန်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်က
ကရင်တိုင်းရင်းသား တွေဟာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်သွားတယ်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ ဘာသာကွဲပြားမှုနဲ့မဆိုင် သမိုင်းရဲ့ လောဂျစ် မကျတာနဲ
့ဆိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့လူမျိုးကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်
အတင်းသွပ်သွင်းကာ သမိုင်း ကို လိမ်နေတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ သမိုင်းမှာ ကျဆုံးရမှာ
၁၉၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁
ကိုးကား။ ။ ၁၊လူ့ အခွင့်အရေးအရေခြုံ
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံစစ်တကောင်းအနွယ်ဝင်ဘင်္ဂါလီတို့၏ နယ်သစ်ချဲ့ ထွင်ရေး
သမိုင်းလိမ်ကို ဝေဖန်ခြင်း၊ ခိုင်မြ၀ါ၊ ရခိုင်အမျိုးသားအသင်းဂျပန်၊
၃။ကျနော်ကျင်လည်ခဲ့ရသောမြန်မာနှင့်ကမ္ဘာ၊ သူရထွန်းတင်၊ ပြည့်စုံစာအုပ်တိုက်၊
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 11:07 AM
မြန်မာပြည်ကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကလွဲလို့ တရုပ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘင်္ဂါလီဘဲဖြစ်ဖြစ် လွှမ်းမိုးလာမှာကို မြန်မာမွတ်စလင်ကော၊ မြန်မာတရုပ်ကော လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ရိုဟင်ဂျာ ဘာလဲ။ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကို စမပြောခင် စာဖတ်သူများကို မေတ္တာရပ်ခံလိုတာက ရိုဟင်ဂျာကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ဖာသာမေးပြီး ကိုယ့်ဖာသာ အရင်စမ်းပြီးဖြေကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် မြင်ပါသလား။ နိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံပါသလား။ လူအဖြစ်ကော အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ခွေးလောက်၊ ကြောင်လောက်ဖြစ်ဖြစ် တန်ဖိုးထားပေးနိုင်ပါသလား။မေးခွန်းက သိပ်ရင့်သီးတယ်၊ လက်တွေ့မကျဘူး၊ ဘယ်သူက လူကို ခွေးလို့ထင်ကြမှလဲဆိုပြီး အပစ်တင်လိုသူများရှိလျင် ရှင်းပြပါရစေ။ ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခွေးလောက်မှ တန်ဖိုးမထားနိုင်တာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘယ်ခွေးကိုမှ မလုပ်တဲ့ လှေပျက်ထဲထဲ့ပြီး ပင်လယ်ထဲမျှောချနေတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒါက ထိုင်းဘဲ။ ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာ ဒါလောက်တော့ မဆိုးသေးပါဘူးဆိုလာရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ဟစ်တလာက ဂျူးလူမျိုး ၆သန်းကျော်ကို ကလေးကော၊ အမေအိုပါမကျန် သတ်တုံးက သူတို့အာရိယန်မျိုးဆက်တွေနဲ့ သွေးမရောရအောင်၊ အစဉ်သန့်ရှင်းနေအောင် လူသားမျိုးညံ့ဂျူးတွေအဖြစ် ကိစ္စတုံးရှင်းပစ်ခဲ့တာပါ။ ခွေးဆိုး၊ ခွေးရူးတွေအဖြစ်သဘောထားပြီး သတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ခွေးဆိုး၊ ခွေးရူးတွေထက်ပိုဆိုးတဲ့ ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးလိုသဘောထားတဲ့ ပညာရှင်များ၊ ခေါင်းဆောင်များ ရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့ရေးပြီး လူသိရှင်ကြားကြေညာထုတ်ဝေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး Influx Virus ဆိုတဲ့စာအုပ်အမည်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရွံရှာမုန်းတီးစရာကောင်းတဲ့၊ အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ ဗိုင်းရပ်ပိုးတွေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်ပိုးတွေကို မပြန့်ပွါးခင် အချိန်မီ အလျင်အမြန် ဖျက်ဆီးပစ်ရသလို ရိုဟင်ဂျာတွေကို မျိုးတုန်း ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လှုံ့ဆော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အတွေးအမြင်ပါ။ ဟစ်တလာထက် ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။လူမျိုးတွေရဲ့ အမည်ပေးပုံကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးတွေကို မာဂဓဆိုတဲ့စကားက ဆင်းသက်လာတဲ့ မောက်လူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အာရကန်လူမျိုးလို့လဲ သမိုင်းမှာ အထင်အရှားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးကို ချစ်ခြင်း၊ အမျိုးဂုဏ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ရခိုင်(ရက္ခိုင်)လူမျိုးလို့ခေါ်မှ နှစ်သက်ကြတာမို့ မောက်၊ အာရကန်လို့မခေါ်တော့ဘဲ အားလုံးက ရခိုင်လူမျိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ပြသနာမရှိပါဘူး။တောင်သူက ပအို့၊ တလိုင်းက မွန်၊ ဂျိန်းဖေါက ကချင်၊ ဆီရမ်(Siam)က ထိုင်း(Thai)၊ ဆီလုံ(Ceylon)က သီရိလင်္ကာ(Srilanka)၊ အက်စကီမိုး(Eskimo)က အိနွတ်(Inuit)လူမျိုး စသဖြင့် မိမိအမျိုးအမည်၊ မိမိနိုင်ငံအမည်ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပြောင်းကြတဲ့အခါ အခြားဘယ်လူမျိုး၊ အခြားဘယ်နိုင်ငံကမှ ငါသဘောမတူရင် ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ မကန့်ကွက်နိုင်ပါဘူး။ ကန့်ကွက်ခွင့် မရှိပါဘူး။ သဘောထားကြီးစွာ၊ နားလည်မှုထားကာ ကာယကံရှင် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတိုင်း သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ပေးရတာပါဘဲ။ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားလား၊ နိုင်ငံသားလား၊ နိုင်ငံခြားသားလားဆိုတာကို ခဏဘေးဖယ်ထားပြီး သူတို့က သူတို့ကို ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်စေချင်တာကို မခေါ်နိုင်ပါဘူးလို့ ငြင်းသင့်ပါသလား။ ငြင်းခွင့်ကော ရှိပါသလား။ သူတို့ကို သမိုင်းမှာ စစ်တကောင်းသားလို့ ခေါ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဘင်္ဂါလီကုလားလို့ ခေါ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ခေါ်တောလို့ ခေါ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဒီနာမည်တွေကို မကြိုက်လို့၊ ဒီနာမည်တွေဟာ နှိမ့်ချခေါ်ဝေါ်တာမို့ မခေါ်ပါနဲ့လို့ တောင်းဆိုတာကို မရဘူး၊ မင်းတို့ နာတာ၊ မကြိုက်တာ ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါခေါ်ချင်တာ ငါခေါ်မယ်လို့ တစ်ဖက်သားကို နှိမ့်ချပြီး ဆိုသင့် ဆိုထိုက်ပါသလား။ --------3------
အပေါ် က စာရေးတာ သိပ်ကောင်းတဲ့ မွတ်ဆလင် ကောင် ကို မေးချင်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ လုပ်သွားလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ က နေ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေ ဘ၀ ကို ကျရောက် သွားခဲ့ တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား တို့ မှာ ကြွင်းကျန်သေးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေးတွေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဇာတ်သိမ်း သွားသလဲ ပြောပြပါဗျို့ ။ အရင်ဆုံး ကြွေးဟောင်းလေးတော့ ကျေအောင်ဆပ်ပေါ့ဗျာ။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား တို့ ကို လည်း မွတ်ဆလင်နိုင်ငံ အဖြစ် ဆက်ထိမ်းထားမယ်။ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ အသစ်ကလေးတွေ ကို လည်း ဆက်လက် ပြီး ထပ်ထပ် လုပ်အုန်း မယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားတို့ မူဆလင်တွေရဲ့ ဘာသာရေး သွန်သင်ချက်လေးတွေ ကို လည်း ထည့်ပြောအုန်းမှ ပေါ့ဗျ။ နည်းနည်းလေးတော့ လွန်တာပေါ့ဗျာ။
ဖြည်းဖြည်း ချင်းလုပ်ပါဗျ။ တစ်နိုင်ငံပြီးမှ တစ်နိုင်ငံပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ ကလည်း လွန်တယ်။ ကက်ရှမီးယားမှာလည်း အစ္စလာမ်နိုင်ငံလိုချင်တယ်၊ ထိုင်းတောင်ပိုင်းလည်း လိုချင်တယ်၊ အစ္စရေးမှာလည်း လို ချင်တယ်၊ ဖိလစ်ပိုင်မှာရော၊ ရခိုင်မှာရော၊ ချေချင်းညှာမှာရော၊ ဇင်ကျန်းမှာရော ခင်ဗျားတို့ အလ္လာဟ်ပြောသလို လုပ်တာလည်း လုပ်ပေါ့။ ဖြည်းဖြည်း သက်သာလုပ်ကြပါဗျာ။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း မွတ်ဆလင် တွေ လူများ လာရင် သူ့ အလို လို ဖြစ်လာမှာ ပေါ့။
ခင်ဗျားတို့ ဒီလောက် မယား၎ယောက် ယူပြီး ကလေး ၂၀ နှုန်းနဲ့ တစ်ပြစ်ပြစ်မွေးနေတာ ပဲ။ ဘာစိုးရိမ်စရာ ရှိလို့ တုန်း။ အချိန်တန်ရင် သူ့ အလိုလို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေ ဖြစ်လာမှာပါဗျ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ။
ဘာလို အခုချက်ချင်းကြီး ကို လိုချင်နေကြတာတုန်း။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ၄ ပုံ ၁ပုံ လည်းရနေပြီလေဗျာ။ ဘာတွေ လောနေတာတုန်း။ သိပြီ ။ သိပြီ။ ၂၁၀၀ ခုနှစ် မရောက် ခင်မှာ ကမ္ဘာကြီး ပေါ် မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာ တစ်ခု တည်း လွမ်းမိုးရမှာ ကိုး ဗျ။ မေ့လို့ ဗျို့ ။ မေ့လို့ ။ခင်ဗျားတို့ မှာ အချိန်မှ သိပ်မကျန်တော့ပဲ။ ဒါကြောင့် မြန်မြန်လုပ်နေကြတာကိုး။ လုပ်လုပ် လုပ် ။ ဆက်သာ လုပ် ။ အဲဒါ မှ ဗိုင်းရပ်စ် မဟုတ်ရင် ဘယ်ဟာ က ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်အုန်းမှာ လဲ မိုဟာမက်ရဲ့ သားတော်မွတ်ဆလင်များရယ်။ ခင်ဗျားတို့ ခေါင်းထဲမှာ သံမှို အရိုက်ခံထားရတဲ့ အစွဲတွေ ကျွတ်သွားတဲ့ တစ်နေ့ ကျရင် ခင်ဗျားတို့ ကို လူသား တွေ အနေနဲ့လူသားတွေ ရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ခင်ဗျားတို့ ကို လက်ခံလာမှာ ပါ ။ တစ် ကမ္ဘာလုံး အလ္လာဟ် ကို ကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ Fight them, until Islam is Supreme ဆိုတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် ကို ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် မီးရှိ့ ဖျက်ဆီ့း ပြီးတဲ့ တစ်နေ့ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ ကို လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း က ပြန်လည်လက်ခံလာမှာပါ။
As long as you separate Rohingya issue and islam ideological teachings as two different topics, you will never find the answer. Rohingya issue is just the tip of an Iceberg.
( PS. Do not argue with Muslims. Their words are full of lies and Deceits like Qur'an instructs )
အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား ကို မွတ်ဆလင် စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ လို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာ ခဲ့တာမဟုတ် ဘူး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးရာဇတ်၊ ဦးဖေခင်၊ ဦးခင်မောင်လတ် ၊ဆရာကြီးဒီးဒုတ်ဦးဘချို တို့ ကို မွတ်ဆလင် စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ လို အစ္စလာမ် ဘာသာ ကို လက်ခံ ခဲ့တာ လား? Just to know, (Muslim) Ruled the India more than 1000 Hundred years, but still Muslims are in minority in India.
Islam did not start from Prophet Muhammad (PBUH) time…. It came with Prophet Adam (PBUH)…means Hindu/Buddhist /Jains/Sikh are also part of Islam but not only Jews and Christians. Mecca temple or Mosque was built by Prophet Ibrahim (PBUH) .
this Blogger in Anti-Rohingya so...we coomment just for Rohingya..Ok......
ပြောရရင်တော့ ရခိုင်အမျိုးသားများက (ရိုဟင်ဂျာ) ဆိုတာဟာ ဘင်္ဂါလီတွေ ပါလို့ တွင်တွင်ပြောနေပါတယ်။ သူတို့ပြောတာ သဘာဝကျတယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုသူတွေ ပြောတဲ့ စကားက ဘင်္ဂါလီနွယ်တဲ့စကား(ဒိုင်ယာလက်စကား)၊ နေထိုင်တဲ့အရပ်က ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နယ်နိမိတ်နဲ့ နယ်စပ် ဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ။ ဘင်္ဂလာဒေရှ့် ဆိုတာက စစ်တကောင်း တောင်တန်းပါဝင်တဲ့ တချိန်ကအရှေ့ဘင်္ဂေါလ်ပြည်ပါ။ အနောက်ဘင်္ဂေါလ်ပြည်က လက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပါ။ အရှေ့ ဘင်္ဂေါလ် ကော အနောက်ဘင်္ဂေါလ်ကော အဓိကအားဖြင့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြတာပါ။ စကားအား ဖြင့်က တော့ ဒိုင်ယာလက်ခွဲတွေအများကြီးပါ။ ဘာသာကတော့ အရှေ့ဘင်္ဂေါလ်(ဘင်္ဂလာဒေရှ်)က ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် များတယ်၊ ဘင်္ဂါလီဗုဒ္မွဘာသာ၊ ဘင်္ဂါလီဟိန္ဒူ နဲ့ ဘင်္ဂါလီ ခရစ်ယာန်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အနောက် ဘင်္ဂေါလ် ပြည်နယ်မှာတော့ ဟိန္ဒူနဲ့ ဗုဒ္မွဘာသာဘင်္ဂါလီက ပိုများပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ စစ်တကောင်းတောင် တန်းဒေသအပါအဝင် ဘင်္ဂေါလ် ၁၂ မြို့ကို ရခိုင်ဘုရင်များ နဲ့ ဘင်္ဂလားဘုရင်များ ဘတပြန်ကျားတပြန် မင်းလုပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာ အထင်အရှားရှိပါတယ်။ ရခိုင်တွေက ဗမာပြည်ကိုလာ ရောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ အကြိမ်ရေ ရှားပေမဲ့ စစ်တကောင်းပြည်ကို သွားအုပ်ချုပ်တဲ့ အကြိမ်ရေကများပုံရပါတယ်။ ရခိုင်ဘုရင်များဟာ မွတ်စလင်ဘွဲ့အမည် ခံယူအုပ်ချုပ်ခဲ့တာတွေလည်း ရခိုင်သမိုင်းမှာရှိပါခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်း ကြောင်းအရကလည်း ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်။ နယ်စပ်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ ဟိုဘက်ဒီ ဘက်နှစ်နိုင်ငံ ခွရှိနေတတ်တာကတော့ သဘာဝ တော့ကျပါတယ်။ -------------1
ခေါ်တောကုလားနားညီးတယ်ကွာ ခွနေမယ့်အစား ဟိုဘက်ကမ်းအပြီးသွားနေကွာ မင်းတို့ရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့ လူနေမှု့စရိုက်ကြောင့် တခြားမူဆလင်တွေပါ သိက်ခါကျတယ်
ကျမက မြန်မာမူဆလင်တစ်ဦးပါ အသက် ၆၅ ရှိပါပီ ကျမတစ်ခါက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာတော့မကြားဖူးခဲ့ပါဘူး ကျမ အဖေက ရခိုင်ဖက်မှာကြီးပြင်းမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလီပါ အမေက မန္တလေးမူဆလင်
သတောင်းစားခွေးကုလား ချီး ကုလား ရိုဟင်ဂျာ
ငါတို့ ဗမာနဲ့ ကော ရခိုင်ကို လာရန်တိုက်နေသေးတယ် ခွေးမသားကုလားရိုဟင်ဂျာ
ဟေးကောင်သီဟာထွန်းဇော် မင်းကမြန်မာမူဆလင်ဖြစ် လိုက်၊ ကရင်ဖြစ်လိုက်၊ ဗမာဖြစ်လိုက်နဲတော်တော်အနေတာ
ဘဲကွာ ၊ဒီcomment သုံးခုစလုံးကိုမင်းတစ်ယောက် တည်း ရေးတာ ငါသိတယ်။MAIလေကြောင်းလိုင်းကိုဖေါက်ခွဲမယ် ဆိုပြီ ထိုင်မြန်မာသံရုံးကိုစာပို့ထားတာလဲမင်းတို့အဖွဲ့မဟုတ်
လား၊မင်းတို့မနက်ဖြန် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာတောင်ငါတို့သိ နေတယ်။မင်းတို့လဲမင်းတို့ဆရာအေးချမ်းလိုဦးဏှောက်ရော ဂါသည်တွေဘဲ+++++
ဟေ့ကောင် ဘင်္ဂလီကုလား (ခွေး အခေါ် ရိုဟင်ဂျာ) ဟိုအပေါ်က ရေးသွားတာ ငါ ပဲ မကျေနပ်ရင် ကြိုက်တဲ့ အချိန်လာခဲ့ KNLA ကငါ ခွေးကုလားယုတ်တွေ ရိုဟင်ဂျာတဲ့ထွီ့ထွီ့ထွီ့....ရွံဖို့ ကောင်းတယ် မင်းတို့ ကောင်တွေ
saw pho kwar said...
ကရင် က ရေးတာ မရေးရဘူးလား ဟေ့ကောင် ရိုဟင်ဂျာ (ခွေးဘာသာ ဖြင့် ခေါ် ခြင်း ဖြစ်မည် )ဘာဖြစ်ချင် လဲ ခွေးသူတောင်းစား ဘင်္ဂလီကုလားတွေ သေချင်နေပီလား
မင်းတို့ ကောင်တွေ ၀က်သားပဲကျွေးချင်တယ်ဟေ့ကောင် ဘင်္ဂလီခေါတောကုလားတွေ ငါတို့ သတ်ရင် ကျည်ကုန်တယ် မင်းတို့ ဝက်သားပဲ စားလိုက်
kachin lay said...
မှတ်ချက်။ ။ဘယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမှ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ မျိုးယုတ်ကုလားများအားအသိအမှတ် မပြု (မပြု)။
ဒီကုလားစုတ်ရိုဟင်ဂျာတွေ ရေးတာကြည့်တာပါလား အဆင့်အတန်းကို မရှိဘူး ရိုင်းကရိုင်းသေးတယ် ဒီဆိုဒ် ကို မိန်းကလေးတွေပါကြည့်တာရှင့် ကုလားယုတ်တွေ ရိုဟင်ဂျာတဲ့ဘာဂျာလဲ ငလ်ိမ်ဂျာပဲ နေ မှာ ပေါက်ကရတွေ လျောက်ရေးတယ် မဟုတ်မမှန်တာတွေ လျောက်ရေးတယ် အလကားရီုဟင်ဂျာ ချီးထုပ် ရိုဟင်ဂျာ ဟွန့် 
ဘင်္ဂလီကုလား ရိုဟင်ဂျာ တွေ နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ဘဲ နေခဲ့ နေခဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ရခိုင်တွေပိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်။
အမယ်လေးလေး ခွေးသတောင်းစားကုလားရိုဟင်ဂျာတွေ နင်တို့ အမေ နင်တို့ သွားလုပ် နင်တို့ နှမတွေ နင်တို့ သွားလုပ်ခိုင်း မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာ အဲဒါကြောင့်လည်း နင်တို့ က အဆင့်အတန်းနိမ့်အောက်ကျ နေတာ လူမှမဟုတ်တာ အောက်တန်းစား ကုလားစုတ်ရိုဟင်ဂျာ နင်တို့ကုလားမခေါင်းဆောင်လေး ဝေနှင်းပွင့်သုန်ကို သွားလုပ်လေ နင်တို့ အချင်းချင်း ခွေးဇာတ်သွားခင်းကြလေ နင်တို့ က ဘယ်ဥ က ပေါက်လာတာလဲ ခွေး နဲ့ ဖွတ်ကျား ပေါင်း ပီး မွေး လာ တဲ့မျိုးမစစ် ကောင်တွေ ၀က်သားစား ကုလားရိုဟင်ဂျာ အရမ်း ယုတ်မာပက်စက် အောက်တန်းကျတဲ့ ဟာတွေ အဆင့်အတန်းမရှိ ဘူး နင်တို့ က
သေချင်းဆိုး ၀က်သားစား ၀က်ရေသောက် မသာချီးကုလားရိုဟင်ဂျာ စကားပြောတာတောင် အောက်တန်းကျ အဆင့်နိမ့် ရိုင်းစိုင်းသေးတယ် နင်တို့ အမေကို နင်တို့ သွားလုပ် နင်တို့ညီမတွေအမတွေ ကိုသွားလုပ်ပါလား နင်တို့ လို ရိုဟင်ဂျာတွေ ခွေးလောက်တောင်အဆင့်မရှိဘူး အောက်တန်းကျလွန်း လို့ဟွန်း
တိုင်းရင်းသားဟုတ်မဟုတ်အငြင်းပွားလာရင်DNAနဲ့တိုက်စစ်ကြည့်မယ်။မြန်မာလူမျိုးစု(၁၃၅)မျိုးရဲ့DNAနဲ့တူရင်တိုင်းရင်းသား၊မတူရင် နိုင်ငံခြားသားဟုတ်ပြီလား။မင်းတို့ခေါ်တောကုလားတွေ ကိုတိုင်းရင်းသားပေးလိုက်ရင် မူအရ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူဘဲပေါ့ကွ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးအဆင့်ဧည့်နိုင်ငံသားဘဲရမယ်။ ဒါဘဲ။
FRC lel ma pay bu. lee bel pay mel hay. ma aye low rohingya muslim dway.
ရခိုင် ဆိုတာ ငါတို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေ မင်းတို့နဲ ဘာဆို ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ မင်းတို့ကောင်တွေက တလောကလုံးမင်းတို့ မူဆလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်ရမယ် မဖြစ်ရင် အကုန်သတ်လို့ မှာထားတဲ့ မင်းတို့ အဖေ ၀က်ကြီး တနှာရူးကြီး(မိုဟာမက်)ပြောတဲ့စကားကိုလိုက်နာနေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ။ ရှင်းလား သူတောင်းစားမွတ်ကုလားတွေ
ဗမာလူမျိုးလောက် အောက်တန်းကျသူ ကမ္ဘာမှာ မရှိပါ။ မြန်မာစကားပုံရှိပါသည်။ ရခိုင်နဲ့ မြွေပွေးတွေ့ရင် မြွေပွေးကို နောက်မှသတ်၊ ရခိုင်ကိုအရင်သတ်လို့ပြောပါတယ်.. ဘာလို့ မြန်မာလူကြီးတွေကပြောခဲ့တာလည်း.. မြန်မာတွေ ဦးနှောက်ရှိတယ်.. ထမင်းစားတယ် မြက်မစားဘူးဆိုရင် စဉ်းစားပေါ့။ သမိုင်းတစ်လျောက် ဗမာနဲ့ရခိုင်ဟာ ခွေးနဲ့ကြောင်ပါဘဲ။ အခုက တူလို့စုမိတာပါ။ ဘာ တူတာလည်းဆိုတော့ မနာလိုဝန်တိုမှု၊ အချောင်လိုချင်မှု၊ ငပိစားတဲ့ဦးနှောက်နဲ့တွေးတောမှု.....